Ciidamada Amisom, ayaa waxay maanta isaga baxeen Deegaanka Ceeljaale oo dhaca duleedka Magaalada Marka – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Amisom, ayaa waxay maanta isaga baxeen Deegaanka Ceeljaale oo dhaca duleedka Magaalada Marka Ee Gobolka Shabellaha Hoose, xilli aanu jirin hujuum kaga imaanaayay Ururka Al Shabaab.
Ciidamada Amisom oo xalay diyaargarow ugu jiray, sidii ay kaga guuri lahaayen Deegaanka Ceeljaale, ayaa barqanimadii maanta si buuxdo kaga baxay halkaasi.
Maxamed Xuseen Maxamed (Shiine), Afhayeenka Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inaysan aqoon goobta ay taggeen Ciidamadii Amisom, ee isaga baxay Ceeljaale.
Afhayeenka oo la hadlay Saxaafadda, ayaa waxaa uu sheegay in Ciidamada Amisom ay qorshe militari kaga guureen Deegaankaasi, laakiin aanay garanayn waxa uu salka ku haayo qorshahoodaasi militari.
Taliska Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ayaan illaa iyo hadda wax war ihi ka soo saarin, tallaabada ay Ciidamadoodu ku soo baneeyeen Deegaanka Ceeljaale.
Xoogaga Al Shabaab, ayaa qabsaday fariisimihii Amisom ee Ceeljaale, waxaana xilligan la soo sheegayaa in Shabaabku, ay ku sugan yihiin halkaasi. Tani waxay halis ku tahay joogitaanka Ciidamada Dowladda ee Marka Cadey.
Muddooyinkii ugu dambeeyay, ayaa waxay Amisom isaga baxday deegaano muhiim ahaa, oo ay kaga sugneyd Gobolka Shabellaha Hoose, ka dib cadaadis kaga imaanaayay Ururka Al Shabaab.
Shabaabka, ayaa 26-kii bishii June weerar kulul ku qaaday Deegaanka Leego, iyagoona ku dilay in ka badan 50 askari. 1-dii Septemberkii, ayay ahayd markii Shabaabku ay xoog ku qabsadeen Xeradii Amisom ee Janaale, iyagoona ku dilay tobonaan ka mid ah Ciidamada Amisom. Weeraradaasi waxay niyad jab ku abuureen Amisom.